Shaqaalaha NISA oo ka cabanaya mushaar la’aan | KEYDMEDIA ONLINE
Shaqaalaha NISA oo ka cabanaya mushaar la’aan
Guud ahaan Shaqaalaha Dowladda ayaa ka cabanaya mushaar wareer, waxaana howl-wadeennada badankood xuquuqaadkooda la duudsiyay bilihii June, July iyo August.
MUQDISHO, Soomaaliya – Sida ay ogaatay Keydmedia Online, waxaa mushaar laa’aan in muddo ah soo socotay ka cabanaya shaqaalaha Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sir-doonka Qaranka, waxaana saacadihii u danbeeyay bannaanka u soo baxay qeylo dhanaata howl-wadeennada hay’addan.
Sida ay KON u sheegeen saraakiil muhiim ah oo ka tirsan NISA, qeyb ka mid ah shaqaalaha ayaa helay kala bar mushaaraadkii ay lahaayeen, waxaana cabashada ugu weyn hadda qaba ilaalada gaarka ah ee Fahad Yaasiin oo ah Agaasimaha hay’adda.
Fahad, ayaa la filayaa inuu iska casilo xilka Taliyaha NISA, si uu ugu tarmayo kursiga Golaha Shacabka ee uu afarti sano ee la soo dhaafay ku fadhiyay Faarax Sheekh Cabdulqaadir, waxaana lagu eedeynayaa inuu xuquuqaadka shaqaalaha uu rabo inuu ku galo doorashada, si uu u boobo kursiga.
Fahad Yaasiin, waxaa loo tix-galiyaa inuu yahay shaqsiga, fidnada ugu badan falkinayay tan iyo billowgii 2017, wuxaana dul-hogana eedeymo waaweyn oo la xariira gabbood-fallo uu galay tan iyo markii loo dhiibay hoggaanka Nabad-sugidda.
Fahad iyo Koox kale, oo Farmaajo aad ugu dhawaa intii uu xaafiiska joogay, ayaa doonaya in ay gabbaad ka dhigtaan Baarlanaaka 11-aad ee JFS, si ay uga badbaadaan in lagala xisaabtamo jarriimooyinkii ay geysteen.
Kooxda Farmaajo, ayaa hore ugu faani jiray in ay bixiyaan mushaaraad dhameystiran, hayeehsee, qeylo dhaanta shaqaalaha ee saddexdii bilood ee la soo dhaafay, ayaa ka dhigan in boob baahsan uu ka socdo xaafiisyada ugu sarreya dalka.